Guurka Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Guurka Finland
Finland waxaa ku guursan karaan muwaadiniinta wadamada oo dhan. Guurka ka dhaca dibaddu wuxuu Finland rasmi ama sharci ka yahay marka laga diiwaangeliyo nidaamka macluumaadka dadka ee Finland kaddib.
Waxaa guursan kara qof kasta oo:
jira ugu yaraan 18 sannadood
aan horay ugu jirin guur ama xiriir lammaane oo diiwaangashan.
Lammaanaha isku jinsiga ah xittaa Finland way isku guursan karaan.
Sida uu qabo sharciga Finland, qaraabada isu dhow ma isguursan karaan.
Guurku mar walba waa doorasho aan qasab aheyn, qofna guur laguma cadaadin karo mana lagu qasbi karo. Tusaale ahaan waalidku carruurtooda kuma cadaadin karaan kumana qasbi karaan in ay guursadaan. Qof kale oo guur lagu qasbay Finland waa ka dembi.
Finland, dumarka iyo raggu iyaga ayaa go’aansan kara qofka ay isguursanayaan. Looma baahna in tusaale ahaan qaraabada ogolaansho la weydiisto.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ku guursashada Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Liiska xasuusta, ee guurka dalka Finland.
Caawimaadda waalidka iyo xiriirka lamaanahaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Guurka iyo sharciga degenaanshaha
Haddii lammaanahaadu uu joogto u deggan yahay Finland, waxaad heli kartaa sharciga degenaanshaha Finland oo guur ku saleysan. Si kastaba ha ahaatee guurku ma sugayo sharciga degenaanshaha. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Sharciga degenaanshaha Lammaanaha.
Guur laguma heli karo jinsiyadda Finland.
Guurka dibadda lagu soo galay
Guurka dibadda lagu soo galay wuxuu Finland rasmi ka noqonayaa marka lagu diiwaangeliyo nidaamka macluumaadka dadka ee Finland. Diiwaangelintu waxay kaaga baahan tahay in aad shahaadada nikaaxa ee asalka ah oo la sharciyeeyay aad geyso Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Caddaymaha uu bixiyay sarkaalka dowliga ah ee Waddamada Waqooyiga Yurub ama Midowga Yurub looma baahna in la sharciyeeyo.
Haddii shahaadadu aysan ku qorneyn luqada Finnishka, Ingiriiska ama Iswidhishka, waa in loo turjumaa luqadahan mid ka mid ah turjumaaddana waa in la sharciyeeyaa. Haddii turjumaadda uu sameeynayo turjubaan ogolaanshaha Finland heysta, looma baahna in turjumaadda la sharciyeeyo. Haddii uu caddayn bixiyay sarkaal ka tirsan wadan Midowga Yurub ah islamarkaasna lagu lifaaqay foomka EU 2016/1191, looma baahna in caddaynta la turjumo.